R/Wasaare Cumar C/rashiid iyo qaar kamid ah wakiilada beesha caalamka oo Muqdisho ku kulmay “Sawirro” – Radio Muqdisho
R/Wasaare Cumar C/rashiid iyo qaar kamid ah wakiilada beesha caalamka oo Muqdisho ku kulmay “Sawirro”
Ra’iisul wasaaraha magacaaban ee Somalia, Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa maanta kulammo la qaatay safiirrada Somalia u jooga dallaka Jabuuti, Turkiga iyo ergayga Qaramada Midoobay ee Somalia. Kulamadan ayaa isugu jiray salaan, hambalyo iyo is-barasho.
Danjirayaashan ayaa soo gaarsiiyay RW Sharma’arke hambalyo ay uga sideen madaxda dalalkooda iyo xoghayha guud ee QM, waxayna ballan-qaadeen in ay sii xoojin doonaan xiriirkii ka dhaxeeya dalalkooda iyo dowladda Somalia.
Sidoo kale, kulamadan ayaa la isku-dhaafsaday talooyin ku aaddan xaaladda dalka iyo sidii xukuumadda uu soo dhisi doono ay wada-shaqayn u dhexmari lahayd, isla markaana horay loogu sii wadi lahaa horumarka ay sannadihii u dambeeyay ee ay Somalia ku tallaabsatay; iyadoo danjirayaashu ay si weyn u soo dhaweeyeen magacaabista ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid.
Ugu dambeyn, ra’iisul wasaaraha cusub ee Somalia ayaa uga mahad-celiyay wakiilladii uu la kulmay dhambaallada ay soo gaarsiiyeen iyo taageerada ay la garab-taagan yihiin dalka Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay in xukuumadda uu soo dhisi doonana ay sii xoojinayso cilaaqaadka kala dhexeeya caalamka.
Ma ahan markii ugu horreysya oo uu Cumar C/rashiid kulan la qaato wakiillo caalamka u jooga Soomaaliya, isagoo Khamiistii shalay kulankiisii ugu horreeyay la yeeshay wakiilka Midowga Afrika ee Somalia, danjire Maman S. Sidikou.